အဆိုတော် ဟန်ထူးလွင် (ကျားပေါက်) က သူ့ရဲ့ ဗရုသုက္ခဗေဒ Podcast မှာ စစ်အာဏာရှင်ကို … – PVTV Myanmar
အဆိုတော် ဟန်ထူးလွင် (ကျားပေါက်) က သူ့ရဲ့ ဗရုသုက္ခဗေဒ Podcast မှာ စစ်အာဏာရှင်ကို ဆန့်ကျင်တော်လှန်ဖို့ ကြိုးစားရင်းလမ်းခုလတ်မှာ ကျဆုံးခဲ့ရတဲ့ အဆိုတော် ရေမွန်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အမှတ်တရတွေကို “My Eulogy for Raymond” ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်နဲ့ သူကိုယ်တိုင်ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်နေတဲ့ 92.00MAMA မှာ ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ထားတာကို PVTV က ထပ်ဆင့်မျှဝေထုတ်လွှင့်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
Like – 81K Share – 14168
2021-06-25 at 10:16 PM
Mya Thandarsoe says:
၂ က်ိပ္ ရွစ္ဆူ အေၾကာင္း သေဘာက်
Jasmium Humile says:
2021-06-25 at 10:36 PM
‌ကိုကျားရေ ရေမွန်နဲ့ အမှတ်တရတွေ ပြောပြပေးလို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်
2021-06-25 at 10:37 PM
ကိုကျားပေါက်ပြောသလိုပဲ သူ့ကို အားမလို အားမရ ဒေါသ ဖြစ်မိတယ်
အမှန်လို့ ကို လက်မခံချင်သေးဘူး
Htun WaiToe says:
စာအုပ်လေး ထွက်လာခဲ့ရင် စောင့်မျှော် နေသူ အများကြီးရှိမှာပါ
ချစ်တဲ့သူတွေရဲ့ အမှတ်တရ တွေက ထာဝရ အသက်ရှင်နေမှာပါ
Nwe Ni Hlyan says:
2021-06-25 at 10:53 PM
စောက်ဒုက္ခပေးတဲ့ဘဝတွေကနေ ငါတို့ပြည်သူတွေ အမြန်လွတ်မြောက်နိုင်ပါစေ ငြိမ်းချမ်းစွာ အနားယူနိုင်ပါစေ တွတ်ပီရေ 🙏
Phyo Naing says:
ဒုက္ခပေး တဲ့ ဘဝ အဲနားလေး မှာ အရမ်း ရ်ိီလိုက်ရတယ်
ရင်ထဲမကောင်းပေမဲ့လည်း စိတ်သက်သာရာရောက်ပါတယ်။ကျေးဇူးပါ ကိုကျား
နွေ ဦး စမ်းရေ says:
2021-06-25 at 11:12 PM
အ​တော်​လေးမ​ပျော်​နေတဲ့ကြားက နှစ်ကျိပ်ရှစ်ဆူဘုရားပွဲအ​ကြောင်းကြား​တော့ မျက်ရည်ထွက်​အောင်ရယ်မိတယ်… ​ကောင်းရာမွန်ရာ ဘဝကို​ရောက်ပါ​စေ… ပွင့်​သောပန်းတိုင်းလန်းခွင့်ရတဲ့တိုင်းပြည်မှာသာ လူပြန်ဖြစ်ပါ​စေ ​ရေမွန်​ရေ ❤
Honey Min Lwin says:
2021-06-25 at 11:34 PM
အတွေးခေါ်တွေကအစအားကျရတဲ့ idols နှစ်ယောက်ဘဲ ပထမဆုံးအနေနဲ့ ko ray mond ကြောင့်သုံးရက်လုံးလုံးငိုခဲ့ရတဲ့ ကိုယ်က 11:31 နာရီမှာ sayr kyar pauk ပြောတဲ့ အမှတ်တရကြောင့် စိတ်လွှတ်ကိုယ်လွှတ်ရီမိခဲ့ပီ idol ရေ dead body နဲ့ ဝမ်းနည်းရတဲ့ ပုံနဲ့ post တွေ အားလုံးဖျက်လိုက်ပီ ကောင်းတဲ့နေရာရောက်မှာ အသေချာဘဲ သိပါတယ်💜
Aye Rebecca says:
2021-06-26 at 12:01 AM
ကိုကျားက သူငယ်ချင်းဆုံးသွားတာ ခံနိုင်ရည်ရှိစွာ Raymondအ​​ကြောင်း ​ပြောနိုင်တာ အရမ်းချီးကျူးတယ် တရားမရှိတာမဟုတ်ဘူး တရားရှိတာလို့​ခပြာမယ် လူတိုင်းကြုံရမဲ့လမ်း ​နောက်ကျတာနဲ့​ ​စောသွားတာ ပဲရှိတယ် ပရိတ်သတ်​တွေကိုစိတ်ချမ်းသာ​အောင်​ပြော​ပေးတာ​ကျေးဇူးတင်တယ် ❤
Mya Wutyi says:
ပျော်ရွှင်ချင်ပါတယ် အခုတောင် နားထောင်ပြီး သူပျော်စေချင်သလို ပျော်နေရပါတယ်
2021-06-26 at 12:44 AM
Nway Oo မင်းနဲ့တော်တော်တူတာပဲ ရေမွန်ရဲ့ type က ဒါကြောင့်လဲ မင်း သူ့ သီချင်းတွေဆို ရင် ပိုခံစားချက်ထည့်သလားလို့ အရင်က ငါထင်မိတာကိုး ။
ဝမ်းနည်းစရာပဲကွာ joker တစ်ယောက်လောကကြီးထဲက ထွက်သွားတာ 😔 စိတ်မကောင်းဖြစ်မိပါတယ်
Aye Myat Nwe Zin says:
ဆောက်ဒုက္ခပေးတဲ့ ဘဝ'(. ..
Shwe Kyawt says:
2021-06-26 at 4:52 AM
ကိုယ်တွေက ဆိုထားတဲ့ သီချင်းတွေကြောင့် ကြိုက်တာ ခုလိုသိရတော့ ပိုနှမြောမိတယ် RIP ပါ ကိုတွတ်
Aniston Khine says:
2021-06-26 at 8:09 AM
သား ဟန်ထူးလွင် ရေ ရေမွန်အတွက်အမှတ်တရ စာအုပ်လေးရေးပါကွယ် Legend never Die.
Haymarn Oo says:
2021-06-26 at 8:42 AM
2021-06-26 at 9:46 AM
share ချင် ရင် Anchor ရဲ့ link ကို share လေဗျာ…
2021-06-26 at 9:51 AM
ဘဝမှာ ရယ်ရင်းနဲ့ ငိုနေမိလိမ့်လိုက်မယ် မထင်ခဲ့ဘူး
Bu Shay says:
2021-06-26 at 10:01 AM
နာထောင်ရတာ သဘောကျရင်း နှမြောမိတယ် 🙂🙂
2021-06-26 at 10:30 AM
၂ ကျိတ်ရှစ်ဆူ ဘုရား လှည့်လည်ခဲ့ပီး တွတ်ပီရဲ့ ချစ်စရာ အလွဲလေးတွေအကြောင်း အမှတ်တရစကားလေး​တွေသိခွင့် ရတဲ့ အတွက် ကျေးဇူးပါ ကိုကျားပေါက်ရေ
Yin Mu says:
2021-06-26 at 1:21 PM
မအလကြောင့် တန်ဖိုးရှိရှိ အရည်အချင်းပြည့် ပြည်သူတွေ အနုပညာရှင်တွေ ဆုံးရှုံးရ😢
2021-06-26 at 1:38 PM
တန်ဖိုးရှိတဲ့ လူတွေကို ဆုံးရှုံးရလေ
ချီးစားငပေါယုန်လေးတို့ ကိုယ်အတွက်ပဲကြည့်တဲ့ အနုပညာရှင်တွေ ရွံလေ ပဲ
2021-06-26 at 4:30 PM
ကိုတွတ်ရေ ကိုကျားပြောသလိုမျိုးဘာလို့ အဲ့လောက်ကိုယ့်ကိုဂရုမစိုက်ပဲ ပေါ့မိတာဗျာ၊😓 အရမ်းစောလွန်တယ်ဗျာ
လောကကြီးအတွက်အဓိပာယ်ရှိတဲ့ ကိုကျားပြောသလို solid ဖြစ်တဲ့သီချင်းတွေ ချန်ခဲ့😓 ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ၊😔 Dထက်ပိုကောင်းတဲ့ဘ၀မှာ အကိုချစ်တဲ့ ဂီတ အနုပညာတွေ ဆက်လုပ်ဆောင်နိုင်ပါစေ၊🙏
ကိုတွတ်နဲ့ပတ်သတ်တဲ့ ပျော်စရာတွေ ပြောပြပေးတဲ့ ကိုကျားကိုလဲ ကျေးဇူးပါဗျာ🙏😓
Thiri Lynn Htein says:
နှစ်ကျိပ်ရှစ်ဆူဘုရားပွဲပြောတာ တော်တော် မျက်စိထဲကို မြင်မိတယ် ဘေးက ဝတ်စုံဖြူက ထီဆောင်းပေး မနက်၄:၃၀ လမ်းထဲဝင်ပြီး $ဒုက္ခပေးတဲ့ဘဝ ဆိုပြီး ဆို ဦးကျား တော်တော်ရယ်ခဲ့ ရမယ် ထင်တယ် အဲ့ ချိန် က
2021-06-27 at 2:50 PM
ဪ အစ္ကို ေျပာျပတာ နားေထာင္ရင္း ရယ္ရင္း နဲ႔မွ ပိုပီး ႏွေမ်ာမိတယ္ဗ်ာ 😢
Zin Thi says:
အသံပါ ကျေးဇူးအရမ်းတင်တယ် ကျားပေါက်ရေ
ကိုယ်ကိုတိုင် အဲ့ဒီအချိန်တွေမှာ ရှိနေသကဲ့သို့